Madaxweynaha Barcelona oo ka hadlay dareenkiisa kaga aadan xiddigooda cusub ee Martin Braithwaite – Gool FM
(Barcelona) 21 Feb 2020. Madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa sheegay in xiddigooda cusub ee Martin Braithwaite uu siin doono awood dheeri ah naadiga Blaugrana.
Dhinaca kale Madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay imaatinka Martin Braithwaite ee garoonka Camp Nou.
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa ugu dambeyn maanta dhammaystiray saxiixa Martin Braithwaite, kaddib markii naadiga reer Catalan ay bixisay lacagaha ay Leganes ku sii dayn kartay Weeraryahankan oo dhan 18 milyan oo euro.
Dhaliyahan Danish-ka ah ee Braithwaite ayaa qalinka ku duugay qandaraas socon doona ilaa 30 bisha June sanadka 2024-ka, halka qandaraaskiisa cusub lagu burburin karo adduun dhan 300 milyan oo euro, si uu ugu noqdo badelka Ousmane Dembélé.
Haddaba Madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona ee Josep Maria Bartomeu oo ka hadlayay Martin Braithwaite wuxuu yiri:
“Aad ayaan ugu faraxsanahay imaatinka ciyaartoy cusub, waxaana rajeyneyaa inuu naga caawin doono horyaalka aan dooneynay inaan ku guuleysto, waa tartan u furan in wax walba ay ka dhacaan, Martin wuxuu na siin doonaa awood dheeri ah”.
“Waxaan falanqeeynay dhamaan xulashooyinka, xulasha Braithwaite ayaa noqday kan u fiican Barcelona”.
“Iyado ay maqan yihiin Ousmane Dembélé iyo Luis Suarez muddo dheer, haddana aad ayaan ugu faraxsanahay saxiixeena cusub ee Martin Braithwaite, waxaana rajeyneynaa inuu si dhaqso leh nooga soo muuqan doono”.